गोलघरबाट उम्किने कसरतमा विकिनी किलर शोभराज ?
HomeAparadh Khabarगोलघरबाट उम्किने कसरतमा विकिनी किलर शोभराज ?
काठमाडौं । ७२ वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय विकिनी किलर चाल्र्स शोभराज मुटुको शल्यक्रिया गरी गोलघरमा फर्किएका छन् । उनले आफ्नो रिहाईका लागि फेरि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदैछन् ।
अदालतले बारम्बार उनको निवेदनलाई खारेज गर्दै आएको छ । अब थप उपचार र स्वतन्त्र जीवनका लागि उनले पुनरावेदन गर्न लागेका हुन् ।
शोभराजको मुटुको शल्यक्रिया सफल भएपछि उनले नयाँ जीवन पाएको सुखानुभुति गरेका छन् । उनलाई बचाउनका लागि नीहिता विश्वाससहितको रगत प्रयोग भएको थियो । कडा सुरक्षा घेराबीच गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा शोभराजको मुटुको शल्यक्रिया डा. रमेश कोइराला नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले गरेको थियो ।
१४ वर्षदेखि नेपाली जेलमा रहेका शोभराज विश्वभर युवती हत्याका कारण कुख्यात थिए । नेपालमा एकजना विदेशी पर्यटक महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा उनले २० वर्षको कैद सजाय पाएका थिए । ५८ वर्षको उमेरमा नेपालमा पक्राउ परेका शोभराजले नेपाली विमानस्थलबाट हात्ति समेत छिराउन सकिने अभिव्यक्ति दिँदै नेपाली सुरक्षालाई चुनौति दिएका थिए ।
सन् १९४४, ६ अप्रिलमा फ्रान्समा जन्मिएका शोभराज भियतनामी र भारतीय मानिन्छन् । द स्प्लिटिङ किलरका रूपमा पनि विश्वकुख्यात शोभराजलाई द सेर्पेन्ट भनेर पनि चिनिने गरेको छ । शोभराजले एक दर्जन हत्या गरेका छन् । उनलाई मनोरोगीको संज्ञा पनि दिइने गरेको छ । उनले आफ्नो साहसिक जीवनशैलीका रूपमा हत्याको श्रृङ्खला मच्चाएका थिए । उनकी आमा भियतनामी थिइन् भने बाबु भारतीय थिए । इन्डोचिनामा उनकी आमाका दोस्रा पति फ्रान्सका एकजना सैनिक अधिकारीले शोभराजलाई हुर्काएका थिए ।
शोभराज १९७० मा भारत आएका थिए । भारतमा पक्राउ परेपछि उनले छुट्नका लागि बाबुसँग रकम माग गरेका थिए । चन्तलसँग मिलेर शोभराजले पर्यटक लुट्ने र हत्या गर्ने कामलाई तिव्रता दिएका थिए । १० भन्दा बढि चोरीका पासपोर्टको प्रयोग गरी आपराधिक दुनियाँमा शोभराज सक्रिय हुँदै गएका थिए ।
शोभराजको आपराधिक हत्या श्रृङ्खलाको तिव्र निरन्तरता भने थाइल्यान्डबाट सुरू भएको थियो ।
नेदरल्यान्डका विद्यार्थीहरू २९ वर्षिया हेन्क विन्तान्जा र २५ वर्षिया कोर्ने्लिया हेमकरलाई शोभराजले हङकङमा भेटेका थिए । उनीहरूलाई पनि थाइल्यान्डमा बोलाएर हत्या गरिएको थियो । शोभराजले जाली पासपोर्ट बनाई नेपालमा लेकरेज भन्ने युवतीलाई सँगै ल्याएका थिए ।